Kulankii Baarlamaanka ee Mooshinka Jawaari oo lagu dhawaaqay inuu Berri dhacayo iyo xaaladda oo meel xun mareyso.... - Caasimada Online
Home Warar Kulankii Baarlamaanka ee Mooshinka Jawaari oo lagu dhawaaqay inuu Berri dhacayo iyo...
Kulankii Baarlamaanka ee Mooshinka Jawaari oo lagu dhawaaqay inuu Berri dhacayo iyo xaaladda oo meel xun mareyso….
Muqdisho (Caasimadda Online) – Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Baarlamaanka C/weli Ibraahim Muudey ayaa ku dhawaaqay in maalinta Berri ee Isniinta ah uu jiro kulan ay yeelanayaan xildhibaannada Baarlmaanka.
Farriin uu u kala diray goor dhoweyd xildhibaannada ayuu ku sheegay in Ajendaha fadhiga uu yahay mooshinkii Guddoomiyaha Golaha Shacabka laga keenay, waxaana farriintan ay soo baxeysaa iyadoo 48-kii saac ee uu danbeeyay ay socdeen waanwaan lagu doonayey in mooshinka xal loogu helo.
Ilo ku dhow dhow Xarunta Villa Hargeysa ayaa sheegaya in xaalada shalay illaa xalay u muuqatay mid degan, isla markaana ay yaraatay xiisadihii maalmihii la soo dhaafay jiray, hase ahaatee farriintan ka timid dhanka Guddoomiye kuxigeenka 1aad ay sii xoojin karto karto is-maandhaafka u dhaxeeya Golaha Shacabka.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa la sheegay in habeen hore uu baajiyay kulankii shalay oo sabti ahaa ay qaban qaabinayeen dhanka Guddoomiye C/wali Muudey oo qorshahooda ahaa inay qabtaan kulanka Baarlamaanka.
Warar xogogaal ah ayaa sheegaya in Guddoomiye kuxigeenka koowaad C/weli Muudey uu ka biyo diidan yahay dadaallada waanwaanta ah ee socda iyo waqtiga lagu luminayo qancinta guddoomiye Jawaari.